Sida loo Beddelaan mod in AVI si fudud oo dhaqso
Brand badan oo caan ah oo kaamirada sida JVC, Canon iyo Panasonic, iwm, badbaadin videos qaab mod. Si kastaba ha ahaatee, mod waa qaab yar-badan-fiican video inuu u ciyaaro ama edit, sababta oo ah in badan oo ay ka mid yihiin barnaamijyada Win ku salaysan software video tafatirka iyo qalabka hardware ma taageeri karaan mod qaab files. Xaaladaha intooda badan, ay doortaan si loogu badalo mod in AVI loogu isticmaalo ballaaran. Haddii aad sidoo kale baahida loo qabo, waxaad isku dayi kartaa converters video hoose si loogu badalo mod in AVI.
Qeybta 1: Best mod in AVI Converter
Qeybta 2: Free mod in AVI Converter
Qeybta 3: Online mod in AVI Converter
Qeybta 1: Hel Best & Professional mod ay u AVI Converter
Professional video Converter: Beddelaan mod in AVI, MP4, wmv, MKV, MOV, iwm iyo xitaa 3D iyo HD videos.
Presets Device badan: Support diinta videos la presets filaayo in qalabka kala duwan sida iPhone, iPad, Samsung, HTC iyo kombuyuutarrada gacanta ka badan.
Edit Videos: Habee videos by falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray saamaynta iyo Cinwaan, iyo in ka badan.
Sida dhaqsaha badan Conversion Speed: Waxaad ku dhameysan kartaa diinta file badan oo daqiiqado yar gudahood 30X ugu dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta.
Features dheeraad ah: Waxaad u isticmaali kartaa si aad xaalkaa video, download videos ka goobood, gubi video inay DVD iyo in ka badan.
1. videos Import mod in mod si Converter AVI
Burcad barnaamijkan ka dib markii aad fiidiyo ku xidhmaan kombiyuutarka. Markiiba, waxaad ka arki kartaa app tani waxaa loading aad fiidiyo files mod in daaqadan app ee. Waxa uu na tusay sida soo socota.
Barnaamijkan ayaa si toos ah u saxday dhammaan faylasha fiidiyo aad u. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay untick files ku aadan rabin in loogu badalo. Markaas, guji badhanka Load in ay ku shuban faylasha aad rabto.
2. Dooro AVI sida qaab wax soo saarka ah
In liiska soo saarka qaab hoose ee interface ah, waxaad geli kari category Video ah, ka dibna dooran AVI sida qaab wax soo saarka.
3. U beddelaan mod in AVI
Bilow fulinaya MOV inay diinta ka AVI ay si fudud u riixaya badhanka badalo ku taala geeska midig ee hoose interface ugu weyn ee ay. Barnaamijkan wuxuu idin tusin qataarrada habka buluug iyo markii ay ka harsan tahay.
Qeybta hoose ee suuqa kala, waxaa jira ah "Output" doorasho. Intii aanay, aad astaysto folder wax soo saarka ama sii Jidka file saarka caadiga ah. Oo markii diinta, waxaad ka heli doontaa files wax soo saarka halkan. Ok, hadda, kaliya ku raaxaystaan ​​files badaley .avi.
Qeybta 2: FreeMOD in AVI Converter
# 1. Free mod in AVI Converter: Wondershare Video Converter Free
Tani gebi ahaanba waa in mod AVI Converter oo lacag la'aan ah. Waxaad ma aha oo kaliya u isticmaali karaa si loogu badalo videos in qaab kasta, download videos ka YouTube iyo xitaa xaalkaa videos by falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray Cinwaan iyo in ka badan.
Pro: 100% xor ah mod in avi Converter
1. Waxa kaliya ee kuu ogolaanaysaa inaad badalo si caadi ah videos. Waxaad ku isticmaali karin si loogu badalo in ay 3D iyo HD videos.
2. Waxaad heli kartaa 30X xawaaraha convertsion ugu dhaqsiyaha badan loogu jeer oo kaliya 10.
3. Waxaad si toos ah aan u bedeli karaan videos in macruufka iyo qalabka Android aad.
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan mod in AVI